Hiran State - News: Taariikhda Hiiraan iyo asalka magaca Somaliya qaabka uu ku yimid.
Taariikhda Hiiraan iyo asalka magaca Somaliya qaabka uu ku yimid.
khubarada ka faaloota taariikhda dalka Soomaaliya waxa ay sheegeen in ereyga Soomaaliya uu ka taaganyahay labo eray oo la'isku geeyay, kuwaasi oo kala ah (Soo-Maal), iyadoo eraga Soo macnihiisa loola jeedo Soco, halka ereyga Maal uu macnihiisu ka soo jeedo Lis.
Marka labadaasi eray la'isku daro waxaa uu noqonayaa (Maal Saca).
Khubarada qaarkood waxa ay sheegaan in magaca Soomaali uu asal ahaan ka soo jeedo ereyga carabiga ee ah (Duu-maa) oo fasir ahaan la macna ah Shacab xoolo badan leh.
Sooyaalka taariikhda qadiimiga ah waxaa iyadana laga helayaa macno kale iyadoo khubaraduna ku doodayaan in ereygaasi uu ka yimid Samaala oo micnihiisu yahay ninkii waranka Dheeraa.
Samaala ayaa la sheegaa in uu ahaa ab iyo waziirkii ay ka soo farcanmeen dadka Soomaaliyeed (Aw-Samaale).
Taariikh ahaan dalka Soomaaliya waxa uu lahaan jiray xadaarad facweyn, waxaana loo aqoon jiray magacyo badan sida Dhulkii udgoonaa , Dhulkii eebe iyo Geeska Africa.
Caasimadda dalka waa Muqdisho, tan labaadna waa Hargeysa, tan sadaxaadna waa Kismaayo, tan afaraadna waa Burco, halka tan shanaadna ay tahay Baydhabo, goboladii ugu horeeyay ee xornimada qaatat ee dalka Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa gobolka Waqooyi ,waxaana xornimada uu qaatay 26-kii bishii June sanadkii 1960-kii, halka gobolada kale ee koonfurtana ay xornimadooda qaateen 1-dii bishii Luulyo sanadii 1960-kii.
Shirkii gumeestayaasha Africa ee lagu qeybsaday Africa ee ka dhacay Magaalada Berlin ee dalka Germany sanadkii 1884-tii ayaa dalka Soomaaliya loogu qeybiyey 5-qeybood ,waxaana shantaasi qeybood ay kala ahaayeen:
· Gobolada Waqooyi oo la siiyay gumeystihii Britain .
· Gobolada koonfureed oo la siiyay gumeystihii Talyaaniga.
· Xeebta Soomaaliyeed ee Jabuuti oo isna loo dhiibay gumeystihii Faransiiska.
· N.F.D oo iyadana la siiyay dalka Kenya
· Iyo gobolada Soomaali galbeed oo gacanta loo geliyay Dowladda Eithiopia .
shantaan gobol waxaa la isku yiraahdaa shanta Soomaaliya, taariikhdu markii ay aheyd 27-dii bishii June sanadii 1977 ayay Jabuutina xornimadeeda qaadatay, waxa ayna noqotay dowlad gaar ah , ha yeeshee dhulka Soomaali galbeed waxaa ay Eithiopia u ogolaatay dowlad Deegaaneed loogu magac daray "kilinka Shanaad", halka Gobolka N.F.D ay Kenya qorsheyneyso inay siiso nidaamka ismaamul Goboleed u gaar ah si la mid ah Gobolada kale ee Kenya.
Hadaba markii ay xurnimada qaateen gobolada Koonfureed sanadii 1960-kii waxay ahaayeen lix gobol oo kala ahaa gobolka Banaadir, gobolka Hiiraan, Gobolka Mudug iyo Gobolka Bari sidoo kale waxaa iyana ku soo idarsamay goboladii waqooyi ee iyaguna isla sanadkaas xornimada qaatay waxayna ku soo darsadeen koonfurta lbadii gobol ee xiligaasi gobolada waqooyi la'isku oran jiray gobolka Waqooyi Galbeed iyo gobolka Togdheer, waxana ay isku noqdeen goboladii jamhuuriyadda sideedaas gobol, markii uu kacaankii milatariga ahaa dalka Qabsaday ee la qaaday ololihii horumarinta reer miyiga ee sanadii 1973-dii ilaa 1974-tii , xiligaasoo ay timid baahi weyn oo ahayd in la magacaabo gobolo kale ,markaas waxaa sideedii gobol lagu kordhiyay todobo kale ,waxayna tirada gobolada dalka noqdeen shan iyo toban gobol ,Bilowgii sanadii 1980-kii waxaa lagu kordhiyay gobolka Jubada dhexe, dabayaaqadii sideetameeyadii ayaa iyana la magacaabay gobolada Sool iyo Awdal ,xiligaasoo tirada gobolada dalku noqdeen sideed iyo toban gobol.
Hadaba Gobolka Hiiraan ,oo ku yaala bartamaha dalka Soomaaliya ayaa waxaa Xaruntiisa ah Magaalada Baladweyne ,waxa ayna ku taalaa Waqooyiga Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, waxa ayna u jirtaa masaafo dhan 335 KM, dhaqaala ahaan waxa ay ku tiirsan tahay xoolaha nool iyo beeraha.
Waxaa sidoo kale Hiiraan ay taariikh lama ilaawaan ah ay ku leedahay la dagaalankii gumeystayaashii dalka ku soo duulay ,iyadoo ay ka banbaxeen halgamayaal iyo madax qarameedyo wadanka Soomaaliya soo hogaamiyay , waxaa ka mid ah Madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya Allah u naxariistee Aadan Cabdulle Cusmaan .
Kheyraadka Dabiiciga ee Hiiraan.
Hiiraan waxa ay leedaha kheyraad badan oo ay ku faani karto , kuwaasoo aan halkaan lagu soo koobi Karin , waxa ay hormuud u tahay dhoofinta Xoolaha nool ee look ala daabulo wadamada Khaliijka carbeed si gaar ah wadanka Sacuudiga,waxaana sidoo kale khudradda noocyadeeda kala duwan iyo xoolaha Ariga,Geela iyo dibiyadda ay u dirtaa Gobolada Galgaduud,Mudug iyo Dowlad Goboleedyada Puntland iyo Somaliland.
Dalagyada Hiiraan Beerato ayaa waxa ay yihiin dalagyo aad u wanaagsan, isla markaana si aad ah loo jecel yahay , waxaana shaxda hoos ku qoran ay muujinaysaa magaca dalaga iyo inta uu ku bislaado:
Magaca Mudada ay ku bislaato
Galayda 90 beri
Magacyada Geed miroodka ka baxa Hiiraan ayaa waxa ay kala yihiin.
Hohob, Mareer, Gud, Dhafaruur, Dhuwan, Ontoro,Deegaan, Dhebi, Gob, Miracas, TukeLalmi, Murcood,Kobash, Askax, Shanfarood, Barde, Dhamaag iyo Qoone
Hiiraan,waxa ay kaloo caan ku tahay geed miroodka loo yaqaan yicib(jicib), halka geedaha loo yaqaan “baar” iyo caday ay yihiin waxyaabaha ku taariikheysan Magaca Hiiraan.
Hiiraan wax bad ama Xeeb ah ma lahan , hayeeshee waxa ay ku tiirsan tahay Dekadaha Magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso ee wadanka Soomaaliya.
Hiiraan waxaa mara webiga ugu dheer ee dalka Soomaaliya oo ah webiga Shabeelle,kaasoo ka yimaada wadanka Eithipia isaga iyo webiga Jubba, waxaana dhirirkisu uu gaaraa 1500km , waxaase ka weyn , kana biyo badan webiga kale ee Jubba oo dhirirkiisu gaaro 800 km.
Webiga Shabeelle , wuxuu dalka ka soo galaa xadka uu gobolka Hiiraan la leeyahay dalka Ethiopia,meel u dhow degmada Feer feer, wuxuuna ka maraa Hiiraan Magaalyooyinka kala ah Beledweyne iyo Buuloburde.
Hiiraan, waxa ay leedahay garoon diyaaradeed, Saldhigyo Milatari,Saldhigyo booliis,Xabsiyo,Maxkamado,xarumo lagu tababaro ciidamada qalabka sida,isbitaalo , MCH-yo iyo adeegyo kale.
Hiiraan , waxaa ka jira haatan Jaamacado,dugsiyo hoose/dhexe/sare ,machadyo iyo malcamadaha Qur’aanka kariimka .
Hiiraan , waxaa dadkeedu ay si gaar ah ay hibad ugu leeyihiin oo ay taariikh ku galeen Cayaaraha hiddaha iyo dhaqanka,fanka iyo fanaanka,kubadda cagta ,kubadda koleyga,orodka iyo bootinta dheer.
Hadaba Hiiraan oo yeelatay dowlad goboleed bishii Augoust 2010-kii ayaa waxa dowlad goboleedka Hiiraan State si la mid ah Dowladda dhexe ee Soomaaliya ay xushmeyneysaa oo ay xuseysaa Munaasabadaha qaran ee dalka sida :
1dii Luulyo 1960kii midoobidii Gobolada waqooyi iyo Koonfur.
1dii luulyo 1960kii xornimadii Gobolada koonfureed.
20kii bishii December sanadii 1950kii aasaaskii booliska soomaaliyeed.
· admin on January 04 2011 17:45:46 · 2 Comments · 7307 Reads ·
#1 | abdi on January 07 2011 21:07:09
waa mahadsantahay ninka soo qoray maqaalka dheer oo ka sheekeynaayo
taariikhda Soomaaliya lakin saaxiib markii aad sheegtay in uu wabiga shabeele soo maro Hiiraan, oo hadana aad sheegtay in uu maro B/wynw iyo B/burte, waxaadan sheegin in uu Jalalaqsina maro,
ma ilowday mise waadanba ogeyn in uu maro?
#2 | nike air max 2011 on August 08 2011 00:46:59
I found your blog to be very informative to your niche, and if I ever need more information on cottage cheese, I will check back to your site.nike air max
I have been visiting your weblog for a while now and I usually discover a gem in your new posts. Thanks for sharing. Found your site on delicious today and really liked it.nike air max 2011.
14,569,585 unique visits